“ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာမများ အစည်းအရုံး၏ ကမ္ဘာ့ ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားတွင် ထုတ်ပြန်သော တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်” | B.M.T.A Burmese Migrant Teachers' Association
← ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း ဆရာ၊ဆရာများ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ကျင်းပ
အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက် သပိတ်မှောက်နေသော ကျောင်းသားများ၏ တောင်းဆိုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာများ အစည်းအရုံး၏ တိုက်တွန်းပန်ကြားချက်။ →
“ရွှေ့ပြောင်းဒေသ ဆရာ၊ဆရာမများ အစည်းအရုံး၏ ကမ္ဘာ့ ဆရာများနေ့ အခမ်းအနားတွင် ထုတ်ပြန်သော တိုက်တွန်းတောင်းဆိုချက်”	Posted on October 13, 2013	by bmta05 BMTA announcement 10h OCT 2013 _ Final_
– Mee Eain Shin Development Foundation school ( MDF), DCLC school (ဘန်ကောက်)
This entry was posted in Announcement, ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် and tagged statement. Bookmark the permalink.	← ထိုင်းနိုင်ငံ မြန်မာရွှေ့ပြောင်း ဆရာ၊ဆရာများ ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့ကျင်းပ